Phantse bonke abantwana abavela kunyaka omnye ukuya kwiminyaka emithathu baxhamla. I-Hysteria iyinto efanelekileyo yokukhathazeka, xa umntwana ebonisa iimvakalelo zakhe ezimbi ngokukhala, ekhwaza, egxotha ngeenyawo zakhe. Abanye abantwana balwa ngexesha lokuhlambalaza, abanye bawela phantsi kwaye banokulwa nalo ngezandla zabo, iinyawo kunye nentloko, ehamba phantsi. Isizathu esiyinhloko sokuzihlaziya kukufikelela kwisiphumo esifunileyo, ukukhusela ingcamango yakho, ukucela into evela kubazali bakho.
Ngaloo ndlela, i-hysteric isetyenziswe ngumntwana njengendlela yokuchaphazela abazali. Kwaye ukuba ngaba abazali bengazange baqonde iimfihlelo zokuziphatha kakuhle ngexesha lobuncinci babantwana, mhlawumbi bayavumelana nalo mntwana kwinto yonke ukuze bamqinisekise. Ngoko umntwana oneminyaka eminyaka uqala ukufunda indlela yokuphatha abazali bakhe, eqonda ukuba xa eqala ukugubungela phantsi kunye nokukhala ngokuzwakalayo, nayiphi na iminqweno yakhe iya kuzaliseka. Ukuba nganye ixesha lokuzikhuphaza, ke uya kuba mnandi kakhulu kwaye ungenangxaki ekubeni umntwana uqala ukwenza i-hysteria esitolo, kwi-kindergarten, esitrato, ekutyeleleni. Kwaye kamva kuya kubachaphazela kakhulu ukubunjwa kohlobo lomntwana. Unako ukukhulisa ukuzithanda, ukuzingca, kunye nomsindo.
Ngoko ke, ngabazali bafanele benzani xa bebancinci abantwana?
Okokuqala, khumbula ukuba kunokwenzeka ukukhusela ukuhlaselwa kwabakhohlisi ngokuziphatha okufanelekileyo nomntwana. Ingqwalasela yabantwana iphazamiseka lula ngokuphandle. Ukuba uvakalelwa kukuba xa unqwenela ukuthenga ithoyizi yakho eyintandokazi, inkunzi iphinda ijonge ukusebenzisa indlela ayithandayo yokukuthintela, zama ukuyenza ngokukhawuleza kwaye ungalindelekanga. Ngokomzekelo, ukuphazamisa ingqalelo kwifestile yelitye engumakhelwane okanye ukumema ukuba aye kwindawo yokudlala yabantwana abathandayo. Ukuba awukwazi ukuthintela ukulungelelanisa kwendawo kwindawo kawonkewonke, kungcono ukumthabatha umntwana kwindawo encinci ukuba umnike ixesha lokuzola. Kufuneka uzinqabise. Umntwana uphathwe kakubi ngento yokuba uqala ukumemeza, kwaye ngamanye amaxesha kunokusongela.
Akukho mfuneko ukuba ufanele ukuthukuthela kwaye uphakamise ilizwi lakho kumntwana ngexesha lokuhlambalaza, ngoko ude wandisa. Musa ukuphikisana nomntwana kwaye ungachazi nto kuye, akayikukuqonda ngeli xesha. Indlela engcono kakhulu yokuphuma kule meko kukushiya umntwana yodwa. Makumemele ukuzonwabisa. Ukuxhatshaza kuthatha ixesha elide kuphela xa umntwana ebona ukuba bamjonga. Abantwana bathanda ukukhala kuphela kubaphulaphuli. Ukuba akukho mntu ukhangele kuye, ngokukhawuleza uyaxhalaka ngokukhala. Xa ndibona ukuba umama uyazibandakanya kwimicimbi yakhe kwaye akayikukhathazeka ngokukhala kwakhe, inkunzi ibuye ibuyele kwimeko yakhe yesiqhelo.
Abanye abantu abanenkani banesidingo ngasinye: abayi kushiya kwigumbi kwaye abayi kufikelela kumama ade umama ngokwakhe enze inyathelo ekuxolelaneni. Ukuba umntwana wakho unobunzima obunenkani, ungamgxeka emva kokuba epholile, kungcono ukuthetha naye ngomusa, ukubonisa into enokuyenza kunye: yenza, ufunde.
Enye yemiphumo engathandekiyo yokukhathazeka kwamanzi ngexesha lokuxhatshazwa kukuhlaselwa kokuxhatshazwa, xa umntwana eba luhlaza kwaye uqala ukuphazamisa. Kungcono ukuba, ukuphepha izimo ezinobungozi. Kodwa ukuba kuyimfuneko, ungabonakali umntwana usenokubonakala ukuba uyamoyika. Abanye abakhohlisi abakhethekileyo banako ukuxelisa nokuhlaselwa kokuxhatshazwa, ukuba ngabahlaziyo abaqhelekileyo kumama akusekho mthethweni!
Ukuhlaselwa kwe-hysteria kudlula, xa umntwana eqala ukukhula kwaye aqonde ukuba yintoni. Ukuba imeko yeentlanzi iqhelekile kumntwana, kwaye ukudabuka kuphindwaphindwa izikhathi 3-4 ngosuku, oko akusikho umqondiso wezempilo yengqondo yomntwana. Kubalulekile ukuyibonisa kwi-neurologist, ekubeni ukunyuka kweentlanzi kuphazamisekisa kakubi isimo sempilo ngokubanzi.
Uphuhliso lwengqondo lomntwana omncinci
Iimvavanyo zamathoyizi zezingane ezivela kwiminyaka emi-2
Ukuphuhlisa intetho yomntwana xa umntwana eqalekisa
Inendima yeengane zomntwana ekukhulisweni kwabantwana
Ndoda yam intanda, dadewethu
Indlela yokuhlala nendoda ebanda ngomoya
Isobho nge sorrel
Indlela yokuzivumelanisa nomsebenzi omtsha, okanye iimfihlelo zokuqala ngokuphumelelayo
Amakhonkco omtshato emotweni - iingcamango ezingaqhelekanga
Kutheni abantu bekhala?
Iimvano zesondo zabesetyhini kunye namadoda
Ukutshata nge-arhente yomtshato
Impembelelo ye-GMO kwimpilo yabantu
Unokuhlangabezana njani nomnyaka omtsha kunye nentanda yakho?
Yintoni amadoda ayifunayo kumfazi olele embhedeni nasebukhosini?